Iseti yomvelisi wedizili, Ukudala iseti, iGenset, iCummins Generator, iSikhululo saMandla-KENTPOWER
KT Omnye uMvelisi weDiesel Brand
Icandelo leDiesel Generator
Iseti yeGenerator ye-KT
SIBONELELA NGEZIXHOBO ZOKUQALA
Inkcazo: KT-cummins Series Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) yasekwa ngo-1919 kwaye izinze eColumbus, eIndiana, eMelika. I-Cummins ibizwa ngegama lomseki wayo, uClaire Lyle Cummins, ongumntu ozifundisayo oomatshini noomatshini abenza izixhobo. ICummins izinze eColumbus, eIndiana, eMelika. Inkampani ibonelela ngeenkonzo kubathengi ngokusebenzisa iiarhente zayo zokuhambisa ezingama-550 kunye neendawo zokuthengisa ezingaphezulu kwama-5,000 kumazwe angaphezu kwe-160 kunye nemimandla kwihlabathi liphela. ICummins ine 34,600 ...
Inkcazo: Mitsubishi Heavy Industries yaseJapan, yasekwa ngo-1884. Yenye yeenkampani eziphezulu ezingama-500 kwaye ikwindawo yesibini kudidi loomatshini ngokubanzi. IMitsubishi Heavy Industries yaqala ukuphuhlisa ukuvelisa iinjini zedizili kunye neeseti zomvelisi ngo-1917. Uyilo, ukuveliswa nokuvavanywa kwamacandelo alo aphambili kwagqitywa ngokukodwa yiMitsubishi Heavy Industries. Iiseti ze-Mitsubishi zedizili ezinokusebenza zinokuhlala zomelele phantsi kwemeko yendalo esingqongileyo ...
Inkcazo: I-Deutz FAW (Dalian) I-Diesel Engine Co., Ltd. yenziwe ngumsunguli we-injini ye-injini-i-German Deutz AG kunye ne-Chinese automobile industry Inkokeli ye-China FAW Group Corporation ityale i-RMB 1.4 billion kwi Umyinge wama-50% kwaye wasekwa ngo-Agasti 2007. Kukho abasebenzi abangama-2000 kunye nomthamo wemveliso yonyaka weeyunithi ezingama-200,000. Inkampani ineqonga lamandla akumgangatho wehlabathi. Iimveliso ezikhokelayo zi-C, E-F, DEUTZ amaqonga amathathu emveliso, uthotho-mathathu ...
Inkcazo: I-Perkins Injini Co, Ltd. yinkxaso yeCaterpillar Corporation kwaye yenye yezona zinto ziphambili ezibonelela ngeedizili ezingekho sendleleni kunye neinjini zegesi yendalo. I-Perkins Injini Co, Ltd. yasekwa ngo-1932, kunye nemveliso yonyaka phantse yeenjini ezingama-400,000. UPerkins ubonelela nge-4-2000 kW idizili kunye neinjini zegesi kubavelisi bezixhobo ezinkulu zamandla ezinje ngeChrysler, Ferguson kunye noWilson. Ngaphezulu kwama-800 abavelisi abaphambili abakhetha izisombululo zamandla kaPerkins kwezolimo, amandla ombane ...
Inkcazo: Amandla e-Doosan Mobile licandelo leQela laseDoosan laseMzantsi Korea. Ngo-Novemba ngo-2007, iDoosan Group, enye yeenkampani ezingama-Fortune 500 emhlabeni, yafumana icandelo lamashishini e-Ingersoll Rand. Emva kothotho lokudibana kweshishini, iDoosan Mobile Power Division yagqitywa ekugqibeleni. IDoosan Mobile Power ibonelela ngezixhobo zamandla eselfowuni kulwakhiwo lwehlabathi, ezemigodi, ukwakha iinqanawa, uphuhliso lwamandla kunye namanye amashishini okwakha ubunjineli, kubandakanya ...
Inkcazo: ICarrieri yeeNjini zeDiesel Generator enexabiso elifanelekileyo lemveliso: URicardo Genset, Kofo Genset, URicardo Diesel Generator, Kofo Diesel Generator, Ricardo Kofo Power Station Power Generator, Genset, Generator set, Power Station, Generating set, Kentpower, Cummins Idizili Generator, iiNxalenye zeGenerator, iiGeneset Parts, iPerkins Generator, iDiesel Cwaka yeGenesis Ukucaciswa:
Inkcazo: U-Yanmar ngumvelisi we-diesel waseJapan onembali engaphezulu kweminyaka eli-100. Inkampani ivelisa iinjini kuluhlu olubanzi lwezicelo: iivili zolwandle, izixhobo zokwakha, izixhobo zezolimo kunye neeseti zomvelisi. Le nkampani izinze eChaya, North District, Osaka, Japan. IJapan YANMAR Co, Ltd. ikhokele umhlaba kwiimveliso ezinobume bendalo kunye nokukhutshwa okungcolileyo okuphantsi, ingxolo ephantsi kunye nongcangcazelo oluphantsi. Injongo kaJanmar kukwenza ...
Inkcazo: Yasekwa ngo-1951, Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (Yuchai Group ngokufutshane) izinze Yulin, Guangxi Zhuang Ukuzilawula Region. Yinkampani kutyalo-mali kunye nolawulo lwemali, ejolise ekusebenzeni kwemali kunye nolawulo lweeasethi. Njengenkampani enkulu yaseburhulumenteni enkulu, inezinto ezingaphezulu kwama-30 ezizezabanini, zibambe, okanye zidityanisiwe, zinempahla yayo yonke eyi-40.5 yezigidigidi ze-yuan kunye nabasebenzi abamalunga nama-20,000. Iqela laseYuchai kukutsha kwangaphakathi e ...
I-FUJIAN KENT MECHANICAL NE-ELECTRICAL CO., LTD (AMANDLA AMFUTSHANE), yasekwa ngo-2005 ngemali eyinkunzi ebhalisiweyo ye-USD $ 15 yezigidi, ukuyila nokuvelisa iiseti zejenereyitha zedizili, iiseti zejenereyitha yendalo, inkqubo yamandla elanga, ukudibanisa ukuhlangana, ukuthengisa kunye nokugcinwa inkonzo. Inkampani ibekwe kwisixeko saseFuzhou, kwiphondo laseFujian, enendawo eyi-100000 yeemitha zesikwere, ngaphezulu kwabasebenzi abali-100. Iimveliso zayo zisetyenziswa ikakhulu njengombane osisigxina okanye amandla kaxakeka kwiinkalo ezininzi ezibalulekileyo, kubandakanya oohola bendlela, oololiwe, izindlu ezinkulu, iihotele, imigodi, izikolo, izibhedlele, iihotele, iifektri kunye nomnxeba kunye nenkqubo yezemali, njl.
Iindaba zenkampani kunye neendaba zeshishini
ISETYENZISIWEYO SEDESILI SOKUFULELA UKUPHATHISWA KWEZILWANYANA
Umzi mveliso wezolimo lwamanzi ukhule ukusuka kwinqanaba lesiko ukuya kwimfuno yokusebenza koomatshini. Ukulungiswa kwesondlo, izixhobo zokuzalela, kunye nokungenisa umoya kunye nezixhobo zokupholisa zonke zenziwe ngoomatshini, nto leyo egqiba ukuba ...
ISIBHEDLELE ESIMILEYO SE-DESEL GENERATOR SET
Iseti yomvelisi wombane oxhasa ugcino lwasesibhedlele kunye namandla ombane agcina imali ebhankini aneemfuno ezifanayo. Zombini zineempawu zokuqhubeka kwamandla kunye nokuthula. Baneemfuno ezingqongqo kuzinzo lwentsebenzo ...
INDLELA YOKUFUNDISA I-DESEL GENERATOR YOKUSETYENZISWA KUSHISHINO
INKONZO yamandla yenza unxibelelwano lukhuseleke ngakumbi. Iiseti ze-Diesel generator zisetyenziselwa ikakhulu ukusetyenziswa kwamandla kwizikhululo ezikumzi mveliso wezonxibelelwano. Izikhululo zenqanaba lephondo zimalunga ne-800KW, kwaye izikhululo zenqanaba likamasipala ngama-300-400KW. Ngokubanzi, ukusetyenziswa ...
UKUSETYENZISWA KWE-DESEL GENERATOR SET
Imfuno yokusebenza yomvelisi wedizili kulwakhiwo lwentsimi kukuba namandla okuphucula umhlwa, kwaye inokusetyenziswa ngaphandle kwayo yonke imozulu. Umsebenzisi unokuhamba ngokulula, abe nokusebenza okuzinzileyo kunye nokusebenza ngokulula. KENTPOWER luphawu lwemveliso ekhethekileyo ebaleni: 1. ...
Iseti yomvelisi wezomkhosi sisixhobo esibalulekileyo sonikezelo lwamandla kwizixhobo zesixhobo phantsi kweemeko zentsimi. Isetyenziselwa ukubonelela ngokukhuselekileyo, ngokuthembekileyo nangokufanelekileyo amandla izixhobo, izixhobo zokulwa kunye nenkxaso yezixhobo, ukuqinisekisa ukusebenza kwezixhobo zokulwa kunye ...
Ofisi yongeza: No.12, Jinzhou North Road, Fuzhou, China
Ifektri yongeza: Indawo yoShishino lweTieling, eFuzhou, China
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye u-pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kunxibelelana nawe kwiiyure ezingama-24.